ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တွေကို ရိုက်ချိုးလေ့ရှိတဲ့ မန်ယူ ၊ လီဗာပူးလ်ရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကို ချိုးနိုင်မလား??? - MySport Myanmar
ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တွေကို ရိုက်ချိုးလေ့ရှိတဲ့ မန်ယူ ၊ လီဗာပူးလ်ရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကို ချိုးနိုင်မလား???
ယခုတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို အပြည့်အဝ ဖမ်းစားဖို့ရှိနေတဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ခု ရှိနေပါတယ်​။ အဲ့ဒါကတော့ အန်ဖီးလ်ကွင်းထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် အစဉ်အလာပြိုင်ဘက် လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ အင်္ဂလန်ဒါဘီပွဲစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ လက်ရှိရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက် ပြင်းပြင်းပျပျ ကြိုးစားနေတဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့်တစ်နေရာမှာ ရှိနေသလို ရှုံးပွဲ မရှိစံချိန်ကိုလည်း ၃၈ပွဲဆက်တိုက် ရရှိထားတဲ့ အသင်းဖြစ်ကာ ယခုတစ်ပတ် အင်္ဂလန်ဒါဘီမှာလည်း ယူနိုက်တက်အသင်းကို အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ ရေပန်းစားနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ချိုးဖျက်လေ့ရှိတဲ့ အသင်းဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက် မှတ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အရှည်ကြာဆုံး ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းတွေဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်း(၄၉ပွဲ) ၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်း(၄၀ပွဲ)တို့ကို ရပ်တန့်ပြထားတာကြောင့် ယခုတစ်ကြိမ်မှာ လီဗာပူးလ်ကို ရပ်တန့်ပြနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဒီပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အိမ်ရှင်အားသာချက် ရှိသလို ကစားပုံပိုင်းမှာလည်း ယူနိုက်တက်ထက် လက်ရှိအချိန်မှာ သာလွန်နေတာကြောင့် အနည်းဆုံး သရေရလဒ် ရရှိမယ်လို့ သုံးသပ် ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်တွေကရော ဘယ်အသင်းက အင်္ဂလန်ဒါဘီမှာ အနိုင် ရရှိသွားမယ်လို့ ထင်ကြလဲဗျ…။
ယခုတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျတှမှော ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို အပွညျ့အဝ ဖမျးစားဖို့ရှိနတေဲ့ ပှဲစဉျတဈခု ရှိနပေါတယျ​။ အဲ့ဒါကတော့ အနျဖီးလျကှငျးထဲမှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမယျ့ အစဉျအလာပွိုငျဘကျ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးတို့ရဲ့ အင်ျဂလနျဒါဘီပှဲစဉျပဲ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးဟာ လကျရှိရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျကို သိမျးပိုကျဖို့အတှကျ ပွငျးပွငျးပပြ ကွိုးစားနတေဲ့ အသငျးဖွဈပွီး အမှတျပေးဇယားရဲ့ အဆငျ့တဈနရောမှာ ရှိနသေလို ရှုံးပှဲ မရှိစံခြိနျကိုလညျး ၃၈ပှဲဆကျတိုကျ ရရှိထားတဲ့ အသငျးဖွဈကာ ယခုတဈပတျ အင်ျဂလနျဒါဘီမှာလညျး ယူနိုကျတကျအသငျးကို အနိုငျယူနိုငျဖို့ ရပေနျးစားနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ရှုံးပှဲမရှိ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ခြိုးဖကျြလရှေိ့တဲ့ အသငျးဖွဈကွောငျး အခကျြအလကျ မှတျတမျးတှအေရ သိရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အရှညျကွာဆုံး ရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျးတှဖွေဈတဲ့ အာဆငျနယျအသငျး(၄၉ပှဲ) ၊ ခယျြလျဆီးအသငျး(၄၀ပှဲ)တို့ကို ရပျတနျ့ပွထားတာကွောငျ့ ယခုတဈကွိမျမှာ လီဗာပူးလျကို ရပျတနျ့ပွနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
ဘောလုံးကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ ဒီပှဲမှာ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အိမျရှငျအားသာခကျြ ရှိသလို ကစားပုံပိုငျးမှာလညျး ယူနိုကျတကျထကျ လကျရှိအခြိနျမှာ သာလှနျနတောကွောငျ့ အနညျးဆုံး သရရေလဒျ ရရှိမယျလို့ သုံးသပျ ဆှေးနှေးထားကွပါတယျ။ ကဲ ပရိသတျတှကေရော ဘယျအသငျးက အင်ျဂလနျဒါဘီမှာ အနိုငျ ရရှိသှားမယျလို့ ထငျကွလဲဗြ…။
MySport Myanmar2020-01-18T12:30:16+06:30January 18th, 2020|Football, Premier League, World|